❤️ Sida sheeko loogu daro Instagram - Winches Club
Ilaa hadda, had iyo jeer waxaa jiray jahawareer ku saabsan sida saxda ah ee loo dhejiyo Sheekada Instagram. Hadii aad sheekadaada ugu horeyso in mudo ah soo dhejiso, waxaad ku dhejin kartaa + sawirka profile kaaga oo waxaad ku dari kartaa sawir ama muuqaal gaaban sheekadaada.
Laakiin mar haddii aad taas samaysay, The + baaba'a. Haddaba maxaad samaysaa marka aad rabto inaad sheeko kale dhejiso ?
Waad ku mahadsan tahay cusbooneysiinta cusub ee Instagram, arintaan xoogaa waa la xaliyay. Hadda aad bay u fududahay oo aad bay u dareen badan tahay in sheeko la daabaco, waxaana jira saddex hab oo waaweyn:
Taabo calaamadda + sida kor ka muuqata – kaliya suurtagal ah sheeko cusub
midigta ka jiid boostadaada
Taabo astaanta kamarada dhanka sare ee midig.
Instagram waxay si cad u qiratay isticmaaleyaasheeda, gaar ahaan dadka aan ahayn Instagrammer-yaasha xiisaha leh, wareer weyn dareemay. Haddii aad rabto dulmar degdeg ah hab kasta, Hoos ka eeg hagahayaga saddexda qaybood ka kooban.
Sheekada Instagram ka sawir profile
Midkani aad buu u fiican yahay in la soo dhejiyo sheeko degdeg ah, laakiin waxa ay shaqaynaysaa haddi aanad soo dhigin sheeko hore 24 saac ee la soo dhaafay. Habkan waxaad ka isticmaali kartaa quudintaada ama bogga boggaga.
Kaliya ku dhufo sawirka profile kaaga calaamadda +.
Ka dib waxaad qaadi kartaa sawir ama muuqaal ama soo geli mid.
Kadibna ku dhufo sheekadaada dhanka bidix ee hoose oo sheekadaada waa la daabici doonaa.
Ku dhaji sheeko ku dhufo midig
Had iyo jeer waxay ahayd sifo, laakiin haddaad garan waydo inay jirto, aad bay u adagtahay in la helo.
Kaliya si toos ah ugu jiid quudintaada.
Sawir ka qaad ama ka soo rar maktabadda.
Taabo sheekadaada dhanka bidix ee hoose oo waa la daabici doonaa.
Ku dhaji sheeko adigoo gujinaya kamarada dhinaca midig ee sare
Tani waa muuqaal weyn oo cusub oo ka yimid Instagram waxayna la macno tahay dadku hadda waxay u soo dhejin karaan sheeko qaab aad u dareen badan.. Waxaad tan ka samayn kartaa boostadaada.
Laga bilaabo boostadaada, kaliya taabo astaanta kamarada ee dhanka sare ee bidix.
Dooro sawir ama muuqaal si aad u isticmaasho.
Guji sheekadaada oo sheekadaada waa la daabici doonaa
Faa'iidada labada hab ee ugu dambeeya ee liiska ku jira waa inaad u isticmaali karto inaad ku darto sawir ama muuqaal dheeri ah sheekadaada, xitaa haddii aad hore u dhejisay mid. Habka ugu horreeya ma shaqeyn doono haddii aad horey u leedahay Instagram Live Story.
Maqaal horeGoorma ayay tahay waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo barta Instagram -ka? ?
Maqaalka XigaWaa maxay Bots Instagram-ka ugu fiican 2020 iyo sida loo ilaaliyo akoonkaaga?